उहाँको खजाना लागि परमेश्वरको मानिस
आफ्नो धन लागि परमेश्वरको मानिस एक मा सबै कुराहरू छ. धेरै साधारण सम्पत्तिहरू उहाँलाई अस्वीकार हुन सक्छ, वा उनलाई छ उहाँले अनुमति दिएको छ भने, the enjoyment of them will...
बाइबलीय Masculinity र Vimeo परमेश्वरको इच्छा देखि रोल मोडेल को महत्व. My friends at Desiring God asked me some questions about the obstacles to manhood and how to fix the problem....
म कथाहरू बारेमा सोच द्वारा शुरू गर्न चाहनुहुन्छ. समय को शुरुवात देखि त्यहाँ हाम्रो कथाहरू मार्फत चलाउन भनेर केही साधारण विषयवस्तुहरू छन्. हामी प्रेम कथाहरू छ, हास्य, and tragedies – or...
कसरी रोमी 8 Vimeo परमेश्वरको इच्छा देखि यात्रा ली मद्दत गर्छ. इच्छा परमेश्वरले मेरो साथीहरूले मलाई सबैभन्दा मलाई मद्दत गर्छ कि धर्मशास्त्रको खण्डमा बारेमा साझेदारी गर्न आग्रह. In this clip I...
यात्रा ली इच्छा परमेश्वरको Vimeo मा एक रोबोट छैन. हाल एक साक्षात्कार समयमा, इच्छा परमेश्वरले मेरो गीत को बारे मा थोडा कुरा गर्न मलाई सोधे, असल जीवन देखि रोबोट